Umkhiqizi kanye neFektri Engcono Kakhulu ye-EVA | Yilibao
Ukuphepha nokuvikelwa kwemvelo: umkhiqizo usebenzisa inqubo yokucindezela ifilimu ye-EVA, ukuphrinta okunemvelo, okunempilo nokungeyona into enobuthi.
1. Ukuphepha nokuvikelwa kwemvelo: umkhiqizo usebenzisa inqubo yokucindezela ifilimu ye-EVA, ukuphrinta okunemvelo, okunempilo nokungeyona into enobuthi
2.I-anti-skid surface, iphephile futhi ayinayo i-skid: indawo ehlelwe ngokulinganayo yokulwa ne-skid, izinyawo azishibilili, ukuthinta okuthambile kusondele kakhudlwana nesikhumba, kuthuthukisa ukungqubuzana, vumela izingane zidlale futhi zikhase ziphephe kakhulu.
3. Imibala ekhanyayo nemiklamo eminingi: ukusetshenziswa kokuklanywa kwamaphethini ahlukahlukene, ingane ifana futhi ikunikeze isikhala sokukhetha esithe xaxa.
4. design ukuqina: ezihlukahlukene ukushuba ayatholakala.
5. Kulula ukuyihlanza: idinga ukusulwa kuphela ngendwangu yendishi emanzi ukuhlanza uthuli.
Ikhomishini yethu kufanele kube ukuhlinzeka amakhasimende ethu nabathengi ngekhwalithi ephezulu ephezulu kanye nemikhiqizo ephathekayo enolaka yefektri Izitolo ze-China Hot Sale Slip Fitness Mat Mat Extra Thick High Density EVA Exercise Extra Long Extra Thick Eco Friendly Mat, Sisaqhubeka nokujaha i-WIN -WIN isimo nabathengi bethu. Samukela ngemfudumalo amaklayenti avela nxazonke zemvelo eza ngenhla ukuvakashelwa nokwakha ukuxhumana okuhlala isikhathi eside.
Khumbula ukuzizwa ukhululekile ukuxhumana nathi ukuthola eminye imininingwane futhi sizokunikeza uhlu lwamanani wokuncintisana ngaleso sikhathi.
Siphakela insizakalo yobungcweti, impendulo esheshayo, ukulethwa ngesikhathi esifanele, ikhwalithi enhle kakhulu nentengo engcono kumakhasimende ethu. Ukwaneliseka kanye nekhredithi enhle kuwo wonke amakhasimende kubaluleke kakhulu kithi. Sigxila kuyo yonke imininingwane yokucubungula ama-oda kumakhasimende aze athole imikhiqizo ephephile nezwakala ngesevisi enhle yokuhleleka kanye nezindleko zokonga. Ngokuya ngalokhu, imikhiqizo yethu ithengiswa kahle emazweni ase-Afrika, eMid-East naseNingizimu-mpumalanga ye-Asia. Ukunamathela kwifilosofi yebhizinisi 'yamakhasimende kuqala, qhubekela phambili', samukela ngobuqotho amaklayenti avela ekhaya nakwamanye amazwe ukuze abambisane nathi.
Langaphambilini Isilayidi Esikhulu
Olandelayo: Isilayidi Esincane